I-China icandelo lokuyilwa kwensimbi kunye noMthengisi | Mestech
Uyilo lweenxalenye zensimbi lubandakanya inkcazo yemilo yolwakhiwo, ubungakanani, ukuchaneka komphezulu kunye neepropathi zoomatshini, kwaye ekugqibeleni kuphuma imizobo kwinxalenye yokugqibela yokuvelisa.
Amalungu esinyithi asetyenziswa ngokubanzi kumashishini ahlukeneyo. Uyilo lweenxalenye zentsimbi ngumthombo wobomi bezinto zesinyithi. I-Mestech ibonelela ngazo zonke iintlobo zokulungiswa kwentsimbi ngokuchanekileyo, ukulungiswa kwemidlalo kunye nokulungiswa kwezixhobo zonxibelelwano, izixhobo zamandla omoya, izixhobo zonyango kunye nezixhobo ze-elektroniki.
Izinto ezibonakalayo kunye neekhemikhali, ubungakanani, imilo, indawo yokusetyenziswa kunye nokusetyenziswa kwezahlulo zesinyithi ezahlukeneyo zonke zibandakanya kwaye zahlukile, kwaye itekhnoloji yokuqhubekeka nayo ininzi kakhulu.
Ukwenza umsebenzi olungileyo kuyilo lwentsimbi, kukho izinto ezintathu ezibalulekileyo ekufuneka sizenzile.
Indawo yokusetyenziswa kwamalungu kunye neemfuno zamalungu
(1). Iimfuno zobukhulu
(2). Iimfuno yobulukhuni
(3). Ukuchaneka komphezulu
(4). Umhlwa Anti
(5). Iimfuno zamandla
(6). Iimfuno ubungqongqo
(7). Ukuhanjiswa kombane kunye neemfuno zokuhambisa
(8). Iimfuno zobunzima
Izimvo eziyi-9. Iimfuno zokuhamba
2. Khetha izinto ezifanelekileyo ngokuchanekileyo
Imigaqo yokukhetha izixhobo zokuyila iinxalenye zesinyithi zezi zilandelayo:
(1). ukuhlangabezana nokusebenza kokusebenza: imathiriyeli kufuneka ikwazi ukuhlangabezana neemfuno zoyilo zamandla, ukuqina, ubunzima, ukuqhuba kunye nezinye izikhombisi.
(2) Ukusebenza kakuhle kokusebenza: kulula ukuqhubekeka kunye nemveliso ezinzileyo, ukuqinisekisa inqanaba lokupasa eliphezulu, kunye nokuhlangabezana neemfuno zoyilo zokuchaneka komlinganiso kunye neemfuno zomsebenzi.
(3) Uqoqosho: luyakwazi ukuqonda imveliso enkulu kunye neendleko eziphantsi.
Ukuthwala okungenanto kunye nokuzala
Ukujonga iimfuno zetekhnoloji yokuqhubekeka kwamalungu, oko kukuthi, uyilo lwamalungu kufuneka luqwalasele itekhnoloji yokuqhubekeka efanelekileyo ukuqinisekisa ukusebenza okufunekayo kunye nokuchaneka, indlela yokunciphisa ubunzima bokuqhubekeka, iindleko kunye nokuphucula imveliso.
(1) Machining: iinxalenye ezineempawu ezingqongqo zoomatshini (amandla, ubunzima) kunye nokuchaneka komlinganiso kunye nozinzo, ezinje ngegiya, iicrankshafts, iibheringi kunye nezinye izinto zokuhambisa izixhobo zomatshini okanye oomatshini bokwakha, intsimbi okanye ingxubevange yobhedu ikhethwe ngokubanzi. Indlela machining ahlabayo ngoomatshini.
(2). Ukunyathela: iinxalenye zepleyiti ezibhityileyo, ezinje ngezikhongozeli, oonokrwece, izithambisi okanye izinto zephepha, isinyithi okanye isitampu sisetyenziswa ngokubanzi. Ukuchaneka kwale teknoloji yokulungisa iphantsi kunokusika, ke ezinye iindawo ezineemfuno ezichanekileyo kufuneka zenziwe ngomatshini.
(3) Zilahla iindawo ezithile ezinemilo entsonkothileyo, ubukhulu becala iinxalenye zesinyithi ezingenanto, ezinje ngeqokobhe lenjini, irediyetha kunye nesiphatho sesibane esenziwe ngealuminium alloy, zinc ingxubevange, ingxubevange yemagniziyam kunye nobhedu wobhedu, ukufa ekubunjweni kungasindisa kakhulu Isixa sokusika kunye nokufumana inqanaba eliphezulu lokuvelisa. Ifanelekile kwimveliso yobuninzi.
(4) Obunye ubuchwephesha bokulungisa: i-extrusion yentsimbi ilungele ukuveliswa kweeprofayili zentsimbi ezinamacandelo eminqamlezo rhoqo, kunye nokusetyenziswa komgubo kusetyenziselwa ukuveliswa kwezinto ezingenazintsimbi.
IMestech ibonelela abathengi ngoyilo lwe-OEM kunye nokuqhubekeka kwamalungu esinyithi. Ukuba unayo nayiphi na imfuno okanye ufuna ulwazi oluthe kratya, nceda unxibelelane nathi.
Egqithileyo Uyilo lwemveliso yeplastiki
Okulandelayo: Metal bexhentsa ngumngundo
Inayiloni inxalenye ziphene yokubumba
Videobell emnyango zeplastiki ebiyelweyo ziphene yokubumba